Taorian'ny - Ny tantaran'ny sarimihetsika hojerena amin'ny Amazon Prime | Bezzia
Taorian'ny: Ny tantaran'ny sarimihetsika hojerena amin'ny Amazon Prime
Susana godoy | 11/01/2022 14:00 | ankehitriny
Raha mbola tsy mahazatra anao izy ireo, dia mety hahita toerana hankafizanao ny iray amin'ireo saga izay manome be dia be horesahina ianao. Mitondra ny lohateny hoe 'After' izy io ary tantara miorina amin'ny tantara nosoratan'i Anna Todd, mpanoratra. Ny fifandraisan'ny tanora, ny fahadisoam-panantenana voalohany, ny finamanana ary ny olan'ny fianakaviana no anisan'ny safidy voatohina amin'ny tantara tahaka izao.
Ny sarimihetsika tsirairay dia mifototra amin'ny iray amin'ireo bokin'i Todd, hatramin'izao manana sarimihetsika telo amin'ireo efatra izay mameno azy ireo izahay. Raha te-hahafantatra misimisy kokoa momba ny tantara tahaka izao ianao, izay azo antoka fa hahasarika anao, dia tsy azonao adino ny manaraka rehetra satria mahaliana anao tokoa. Vonona ve ianao sa vonona amin'izany?
1 Aorian'ny: Manomboka eto ny zava-drehetra
2 Aorian'ny: Amin'ny ampahany arivo
3 Taorian'ny: Lost Souls
Aorian'ny: Manomboka eto ny zava-drehetra
Araka ny efa noresahinay, hatreto dia misy sarimihetsika telo azonao jerena ao amin'ny Amazon Prime. Ny voalohany dia mitondra ny lohateny hoe 'Aorian'ny: Manomboka eto ny zava-drehetra'. Ao anatin'izany no ahitantsika ny fomba ambaran'ny romanticism tanora. Hihaona amin'i Tessa Young izay miala ny tranony isika satria manomboka ny oniversite. Hahazo namana vaovao izy, izay na dia tsy tia azy ireo aza ny reniny, dia tsy miraharaha azy ireo na dia kely aza. Ahoana no tsy dia kely, zazalahy iray koa miseho eo amin'ny fiainany. Mazava ho azy fa rehefa toa mahazo azy mianaka ny fanintonana, dia misy olona fahatelo miezaka manokatra ny masony amin'ny filazana aminy fa ny zava-drehetra dia mifototra amin'ny lalao iray nataon'izy ireo indray alina. Zavatra tsy nety tanteraka, fa nahatonga an'i Tessa hiova tanteraka. Na dia manana zavatra maro iraisan'izy ireo sy i Hardin aza izy ireo ary toa mbola manan-danja kokoa izy ireo. Ka ny ampahany voalohany dia mampiseho amintsika ny fomba nihaonany, ny fomba nipoiran'ny fifandraisan'izy ireo ary ny fahadisoam-panantenana voalohany sy ny olana ara-pianakaviana.
Aorian'ny: Amin'ny ampahany arivo
Rehefa mitombo izy ireo dia miova koa ny tantara vaovao. Ankehitriny dia mikasa ny hifantoka amin’ny fianarana i Tessa, satria io no tena iriany sy ilainy. Mahazo asa amin'ny maha-interna azy koa izy, ka fahafahana tsara ho an'ny hoaviny ary tsy tiany hisy hisakana azy. Na dia tsy tsotra foana araka izay irinay aza izany. Satria amin'ny asany dia manana mpiara-miasa izay manintona azy ihany koa izy, satria fantany fa io no dikan-teny ilaina eo anilany fa tsy olona toa an'i Hardin. Toa mampiseho ny endriny ratsy indrindra indray izany ary rehefa nieritreritra ianao fa efa voavaha ny olana sasany dia mipoitra eo anoloanao indray izy ireo. Saingy marina fa tsy afaka miady amin'ny fitiavana ianao, sa mety ho vitanao? Ny sarimihetsika faharoa amin'ny saga izay azonao jerena ao amin'ny Amazon Prime Ary na dia tsy nahazo hevitra tsara aza, dia toa nanana hevitra hafa ny vahoaka.
Taorian'ny: Lost Souls
Tonga tamin'ny sarimihetsika fahatelo izahay, ary hatramin'izao dia ity no farany azonay azo atao amin'ny Amazon Prime. Hatramin'ny navoaka tamin'ny 2021 ity iray ity ary tsy maintsy miandry kely isika vao tonga ny ampahany fahefatra. Amin'izao fotoana izao dia toa mihamitombo hatrany ny fifandraisana misy eo amin'ny roa tonta. Saingy rehefa hita fa mihamatanjaka ny fifandraisan'ny olon-dehibe, ny ray aman-dreny sy ny fianakavian'izy ireo tsirairay avy. Ho takatr’izy ireo amin’izay fa mety hisy fomba fijery mifanohitra amin’ny fiainana indray ary hisalasala ny fihetseham-pony mihitsy aza, satria mbola betsaka ny tsiambaratelo hambara mandritra ny sarimihetsika. Saingy tsara kokoa ny mijery azy manokana satria manana tantara be dia be izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » Taorian'ny: Ny tantaran'ny sarimihetsika hojerena amin'ny Amazon Prime
Fanatanjahan-tena atao amin'ny lanjan'ny kitrokely